Shabaab oo qarxiyay Buundo ku taalla Shabeellaha Hoose | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Shabaab oo qarxiyay Buundo ku taalla Shabeellaha Hoose
Shabaab oo qarxiyay Buundo ku taalla Shabeellaha Hoose
Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta qarxiyay mid ka mid ah Buundooyinka loo maro degmada Qoryooley oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Masuuliyiinta gobolka Shabeellaha Hoose ayaa Idaacadda Radio baidoa u sheegay in Shabaab ay Miino ku xireen Buundada, kadibna ay qarxiyeen, sidaasina ay ku burburtay Buundada.
Gudoomiye kuxigeenka dhanka Maaliyadda gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji oo la hadlay Idaacadda Radio baidoa ayaa waxa uu sheegay in halkaasi ay baxeen ciidamo ka tirsan dowladda, wixii ka soo baxana ay dib ka soo sheegi doonaan.
“Shabaab ayaa waxa ay qarxiyeen mid ka mid ah Buundooyinka loo maro degmada Qoryooley, Buundada way burburtay, Ciidamo ayaa ku baxay falkaasi, dhawaan waxaan qorsheyneynaa inaan dib u dhisno Buundadaasi, mana ka yeli doono Shabaab inay go’doomiyaan degmada Qoryooley.” Ayuu yiri Guddoomiye C/fataax.